I-SPC Smartee Boost, i-smartwatch ngentengo ephansi kakhulu | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 09/08/2021 10:00 | General, Izibuyekezo
Amawashi ama-Smart asevele enziwe ngentando yeningi ngenxa yokuthandwa, kumikhiqizo efana ne SPC ezinikezela ngemikhiqizo yamabanga wokufinyelela wazo zonke izethameli. Kulokhu sikhuluma ngamawashi ahlakaniphile, okuyilokho okufanele sikuhlaziye, futhi ikakhulukazi mayelana nenye indlela enhle kakhulu uma sikhuluma ngentengo nokusebenza kwayo.
Sikhuluma nge-Spee's Smartee Boost, i-smartwatch sayo sakamuva esine-GPS edidiyelwe nokuzimela okukhulu okunikezwa ngentengo yokonga. Thola nathi le divayisi entsha futhi uma ikufanele ngempela yize inenani elifanele, ungaphuthelwa yilokhu kuhlaziywa okujulile.
Njengoba kwenzeka kaningi, sinqume ukuhambisana nalokhu kuhlaziywa nevidiyo ye- isiteshi sethu se-YouTube, ngale ndlela uzokwazi ukubheka hhayi kuphela i-unboxing kepha nayo yonke inqubo yokumisa, ngakho-ke sikumema ukuthi ugcwalise lokhu kuhlaziywa ungabheka futhi usisize siqhubeke sikhula.
3 Isikrini nohlelo lokusebenza
4 Ukuziqeqesha nokuzimela
5 Isibonisi somsebenzisi nesipiliyoni
Njengoba kungalindelwa kuwashi kuleli banga lamanani, sithola idivaysi eyakhiwe ngepulasitiki. Kokubili ibhokisi nezansi kuhlanganisa uhlobo lweplastiki emnyama emnyama, yize singathenga nohlobo olupinki.
Isisindo: 35 amagremu
Ubukhulu: 250 x 37 x 12mm
Umucu ofakiwe ungowendawo yonke, ngakho-ke singawuthatha kalula, okuyinzuzo enhle. Inobukhulu obungu-250 x 37 x 12 mm ngakho-ke ayinkulu kangako, futhi inesisindo esingu-35 grams kuphela. Iwashi elihlangene kahle, yize isikrini singangeni ngaphambili lonke.
Sinenkinobho eyodwa okulingisa ukuba ngumqhele ngakwesokunene nangemuva, ngaphezu kwezinzwa, inendawo yezikhonkwane zikazibuthe zokushaja. Mayelana nalokhu, iwashi likhululekile futhi lisebenziseka kalula.
Sigxila ekuxhumekeni, futhi ukuthi kuzungeza amaphuzu amabili ayisisekelo. Okokuqala ukuthi sinakho I-Bluetooth 5.0 LE, Ngakho-ke, izinga lokusetshenziswa kohlelo ngeke libe nomthelela omubi ebhethri ledivayisi uqobo noma lelo le-smartphone esiyisebenzisayo. Ngaphezu kwalokho, sinakho GPS, Ngakho-ke sizokwazi ukuphatha ukunyakaza kwethu ngokunembile lapho silawula izikhathi zokuqeqesha, ezivivinyweni zethu kunikeze imiphumela emihle. Ngendlela efanayo I-GPS ibuye isibeke ukuze sicabangele izingxenye ezithile zohlelo lokusebenza lwesimo sezulu olufakiwe.
Iwashi alinamanzi angafika kumamitha angama-50, empeleni akumele kube nenkinga uma ubhukuda nayo, lokhu kungabangelwa ukuthi ayinayo imakrofoni nezipikha, kepha liyazamazama futhi lenza kahle impela. Ngokusobala sinesilinganiso sokushaya kwenhliziyo, kepha hhayi ngesilinganiso somoya-mpilo wegazi, isici esivame kakhulu.
Angiphuthelwa omunye umsebenzi inqobo nje uma sicabangela intengo ephansi yalo mkhiqizo, eyenzelwe ibanga lokufinyelela.
Isikrini nohlelo lokusebenza
Sinefayela le- iphaneli elincane kakhulu le-IPS LCD, ikakhulukazi ngama-intshi angu-1,3 esewonke okushiya ifreyimu engezansi evezwe ngandlela thile. Ngaphandle kwalokhu, kukhombisa okungaphezulu kokwanele ukusebenza kwansuku zonke. Ngenxa yokuhlinzekwa kwayo ezivivinyweni zethu sikwazi ukufunda kalula izaziso futhi kunezinzuzo ezithile eziphawulekayo.
Esokuqala ukuthi iyiphaneli elinamathiselwe futhi elinokumboza okungabonakali ukuze isetshenziswe kalula ekukhanyeni kwelanga. Uma sikuphelezela lokhu ngokukhanya okuphezulu nobuncane okukunikezayo, iqiniso ukuthi ukusetshenziswa kwaso ngaphandle kunethezekile, kunama-engeli amahle futhi asilahlekelwa yiluphi ulwazi.
Uhlelo lokusebenza lwe-Smartee olutholakalela i- iOS futhi Android Kukhanya, ngesikhathi sokukuvumelanisa kufanele senze lokhu okulandelayo kuphela:
Shaja idivayisi ukuze ivuleke
Silanda uhlelo lokusebenza
Singena bese sigcwalisa uhlu lwemibuzo
Siskena ibhakhodi ngenombolo ye-serial yebhokisi
I-SPC Smartee Box yethu izovela bese ichofoza ku-connect
Ku Aplicación Singabonisana nemininingwane eminingi ephathelene nokusebenza komzimba wethu njenge:
Ukulandela ngomkhondo ukulala
Ukulandelela kokushaya kwenhliziyo
Naphezu kwakho konke, uhlelo lokusebenza mhlawumbe lulula ngokweqile. Isinikeza imininingwane encane, yize yanele kulokho okushiwo yidivayisi.
Idivayisi inezinombolo eziningi ze- ukuhlelwa kokuqeqeshwa, okulandelayo ngqo okulandelayo:
Ukuhamba ngebhayisikili endlini
Ukubhukuda kwamanzi okuvula
I-GPS izocushwa ngokuzenzekelayo emisebenzini "yangaphandle". Singaguqula izinqamuleli zokuqeqeshwa kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi wewashi uqobo.
Ngokuqondene nebhethri sine-210 mAh enikela ngezinsuku eziyi-12 eziqhubekayo, Kepha ngezikhathi ezithile ezisebenzayo ne-GPS yenziwe yasebenza, siyinciphisile yaba yizinsuku eziyi-10, nayo engeyimbi.
Isibonisi somsebenzisi nesipiliyoni
I-interface yomsebenzisi inembile, yebo, sinemikhakha engu-4 kuphela esingayiguqula ngokwenza umshini omude ku- «start». Ngendlela efanayo, ekuhambeni kwesobunxele sinokufinyelela okuqondile kwi-GPS nomsebenzi wokuthola ifoni, ezokhipha umsindo.
Kuthunyelwe ku: 9 Agasti 2021
Ngakwesokudla sinemininingwane yezempilo nokuqeqeshwa, kanye nakudrowa lokufaka izicelo sizokwazi ukufinyelela kuma-alamu, uhlelo lokusebenza lweSimo sezulu nokunye okuningi okuzosisiza ekusebenzeni kwansuku zonke. Ukuthembeka, kunikeza ukusebenza okumbalwa okungaphezu kwalokho okunganikezwa isongo lokulandela umkhondo wezemidlalo, kepha usayizi wesibuko nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi senza kube lula ukusebenzisa nsuku zonke.
Ngamafuphi, sinomkhiqizo onokuthi ufane nesongo lokulandela umkhondo, kepha unikeze isikrini ngokukhanya okuhle nosayizi owanele. ukwenza lula ukusetshenziswa kwayo ngentengo engaphansi kwama-euro angama-60 ezindaweni ezijwayelekile zokuthengisa. Enye indlela ethakazelisa kakhulu nenani elifanele kakhulu uma sikhuluma nge-smartwatch.
Isibonisi esisebenzayo nesikhanyayo
Ine-GPS nokusebenza okuningi
Ungakwazi ukubhukuda ngayo
Ukuzimela kwehla nge-GPS yenziwe yasebenza
Imitha ye-oksijini ayikho
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-SPC Smartee Boost, i-smartwatch ngentengo ephansi kakhulu